Ngeshwa, abantu bamshaya indiva ngokwanele kule ingxenye yomzimba, efana iqakala, yize-ke ebangela umthwalo ngobuningi. Siqukethe amathambo amathathu, imisipha oxhumene:
- the fibula.
Umsebenzi oyinhloko we-talus ukuqinisekisa ukuzinza kanye nokusimama nezicubu namathambo. Lokhu ibangelwa ukuma ekhethekile ke: ezingemuva ingxenye kancane iyincane kunobubanzi ngaphambili, okuyinto enomthelela ukuxhumana okuthembekile. ukufuduka Lateral ayivunyelwe ngenxa emisipheni peroneal, ukulungisa iqakala ngaphandle. Tibiofibular umsipha imvilophi ngokuhlanganyela ngaphambili futhi bakhulise ukuvimbela Ukwenyela. A kwakwakhe ngoba enamandla okuhambelana umsipha interosseous.
Iqakala iqukethe imisipha evumela ukuthi iminwe ukwenza imisebenzi yaso, okungukuthi, kuyasiza ukugoba futhi unbend kubo. Ngenxa zonke izicubu ngokuhlanganyela kwenzeka evula abuye avale unyawo, yena. Iningi umonakalo we izingxenye zomzimba elihlobene ne displacement we talus noma isenyelo, izingqinamba zayo.
Uma iqakala obukhulu, lokho kungase kubonise ukuthi sokuqaqamba kwamalunga noma dislocation. Ngaphezu kwalokho, ukuba khona kuqala zone ekubhujisweni lisabalele futhi kuhlanganisa okungaphezu kokukodwa ngokuhlanganyela. Ngokuvamile, isiguli iyahlupheka bezwe izinhlungu, ikakhulukazi ebusuku noma ngesikhathi ukunyakaza okukhulu futhi isikhathi eside. Iqakala ngenkathi kakhulu siyakhukhumala.
Izimbangela zobuhlungu amanga, okokuqala kunakho konke, endabeni yokukhetha nezicathulo. Abantu abaningi abaqondi unamathisele Okubaluleke kakhulu ukukhethwa eliphezulu izinto, nakuba lokhu kuncike isimo sempilo isikhathi eside. Shoes nsuku zonke kufanele kube njengoba elula, ifomu lesifanele, ifaniswe ngobukhulu futhi wenziwe impahla yemvelo. Kubalulekile nokukhumbula ukuthi lezi zincomo kudingeka kucatshangelwe ngokucophelela okukhulu yabadlali. Ngemva ukuqeqesha esikhathini eside engaphelele Shine asihole ukujuluka ngokweqile futhi prenyl stop.
Joint iqakala kungaphazamisa umuntu lapho lilimele. Omunye lwezinhlobo ezivame kakhulu yokulimala kuyinto bhinyila. Kungaba recognize ukuvuvukala okunamandla izitho zomzimba ahlekise lapho ezihambayo ke. nakho Sibekezele okwandisa ubuhlungu eqakaleni lisemhlabathini. symptomatology Okufanayo has a iqakala eziphukile, engavamile nje wukuthi ubuhlungu usabalala yonke ingxenye engezansi esitho lapho ichichima iqakala.
Ngaphansi ezivamile iqakala ukwa nge subluxation senyawo. Kulokhu, joint iqakala kakhulu ukuvuvukala njalo ukunyakaza kuholela sebuhlungwini obunzima. Futhi unyawo lwakhe kuthatha indawo ezingezona ezemvelo: it is esitshekile ukuphendukela kunoma iluphi uhlangothi, kuye ubunjalo dislocation. Uma kubhekwa esitho yisiguli bangazizwa izingcezwana ithambo. Ukwaphuka we calcaneus kubhekwa omunye yokulimala kabi kakhulu ngezinyawo kanye yokutakula kuthatha isikhathi eside. Ngokuvamile, isiguli likhawulelwe ukunyakaza futhi awukwazi ngisho nokusukuma, ngoba ubuhlungu acute kubangelwa ukwethembela isithende. Ukuze lolu hlobo umonakalo futhi libhekene ukuvuvukala. Ayikho sina kancane ubhekwa ophukayo amathambo metatarsal. Kulokhu, akukho okwenza libukeke njengendandatho hematoma endaweni yokulimala, unyawo livuvukele ngokuphelele bese kuba sengathi umcamelo. Libhekene ubuhlungu nge noma yikuphi ukunyakaza joint iqakala.
Dislocations noma subluxations Ngokuvamile zihilela ukubonakala ukwaphuka we talus. Lolu hlobo umonakalo is zihlukaniswa khona edema endaweni joint futhi esithendeni, futhi hematoma. Engozini abantu abakhuluphele, nge ababuthakathaka futhi imisipha atrophied. Njengoba umkhuba sibonisa, dislocation evamile okuyinto livelile okokuqala, kungase kuthathe amasonto ambalwa, futhi kufanele kulindeleke ngemuva kwezinyanga ezimbili ephelele ukuvuselelwa ngokuhlanganyela. Kodwa iziguli nge abampofu kwemisipha izicubu akufanele kusimangaze ukuphindaphinda dislocation. Ngaphandle kokwelashwa efanele futhi ukunakekela umzimba njalo dislocation kuholela ukuphazamiseka uqwanga futhi ukubukeka izifo ezifana isifo samathambo.
Ukwephula thermoregulation zomzimba: izimbangela kanye nezimpawu
Indlela ukuvula umnyango lapho lock is bagibele: isinyathelo ngesinyathelo imiyalelo, Izincomo
Indlela ukusika esiphongweni yakho kuze kube sohlangothini: imfundo
Henna Izinwele: inzuzo noma ilimaze